Teknụzụ mkpuchi mkpuchi invisibility: Jiri ngwa nbipute 3-D mee onwe gị - Blọọgụ ahụike 2022
Teknụzụ mkpuchi mkpuchi invisibility: Jiri ngwa nbipute 3-D mee onwe gị
Uwe mkpuchi enweghị ahụ anya dị nso - onye injinia eletriki na-asụ ụzọ na-ekwe nkwa na onye ọ bụla nwere ike ịnweta ngwa nbipute 3-D "nwere ike ịme uwe rọba n'otu abalị" nke na-ekpuchi obere ihe n'okpuru ogologo ogologo ọkụ.
Uwe mkpuchi na-adịghị ahụ anya abụwo ihe akụkọ ifo, site na akụkọ ifo ndị Gris oge ochie ruo Harry Potter. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọganihu injinia ewetala ngwaọrụ anwansi n'ime mpaghara nke ohere sayensị.
Na 2006, otu ndị injinia na Mahadum Duke mepụtara uwe mkpuchi invisibility nke mbụ na-arụ ọrụ. Ngwa metamaterial ahụ nwere oke - ọ na-arụ ọrụ naanị n'akụkụ abụọ n'okpuru oghere microwave, ọ bụghị ìhè a na-ahụ anya. Kemgbe ahụ, ndị nchọpụta ewepụtala teknụzụ iji kpuchie ihe ndị nwere akụkụ atọ buru ibu dịka otu ụkwụ na dayameta, na-enweghị onyinyo ọ bụla.
Ugbu a Yaroslav Urzhumov, onye osote prọfesọ na-eme nchọpụta na injinịa eletriki na kọmpụta na Mahadum Duke, ekwupụtala usoro maka ngwaọrụ dị otú ahụ na akwụkwọ akụkọ Optics Letters nke dị mfe imepụtagharị nke na onye ọ bụla nwere ike ịnweta ngwa nbipute 3-D nwere ike wuo ya. nke onwe.
Kedu ka mkpuchi mkpuchi invisibility si arụ ọrụ?
Teknụzụ mkpuchi mkpuchi invisibility ka na-atụgharị naanị igwe onyonyo microwave, mana ndị nyocha ahụ nwere olile anya na ha nwere ike mechaa tweak usoro ha iji gbochie ogologo ikuku dị elu dị ka ìhè a na-ahụ anya na infrared, maka enweghị ike ịhụ anya n'ezie n'anya mmadụ.
Yaroslav Urzhumov na-egosi ngwaọrụ mkpuchi invisibility nke 3D ebipụtara, nke nwere oke Frisbee ma jiri oghere na-emegharị ngwa ngwa. [Mahadum Duke]
Ngwa mkpuchi nke Urzhumov bụ diski okirikiri nke dị ka Frisbee, nke nwere oghere dị iche iche na nha dị iche iche nke e mere iji chefuo ihie microwave. A na-edobe ihe na-adịghị ahụkebe n'obere oghere dị n'etiti etiti diski ahụ, mgbe a na-atụnye ihie microwave na ihe ahụ, ihe mkpuchi mkpuchi ahụ na-ewepụ ogwe ndị ahụ ka ihe ahụ pụta ìhè.
"Nhazi nke uwe mwụda ahụ na-ewepụ 'onyinyo' nke a ga-atụba, ma na-egbochi mgbasa site na ihe a ga-atụ anya ya," Urzhumov kọwara na ntọhapụ akụkọ.
"N'ikpeazụ, a na-eme ka ihe na-egbuke egbuke, nke na-egbukepụ egbukepụ, dị ka cylinder ígwè, na-adịghị ahụ anya. A na-eji nlezianya na-eduzi microwaves site na shei dielectric dị mkpa wee weghachite azụ n'ime ohere efu n'akụkụ ndò nke uwe mkpuchi ahụ."
David Smith, onye prọfesọ injinia Duke na onye ode akwụkwọ dị elu na akwụkwọ ọhụrụ ahụ, kọwara sayensị nke invisibility-akwalite metamerials n'afọ gara aga:
Kedu otu ị ga-esi bipụta ngwaọrụ mkpuchi nke gị?
Urzhumov na-ekwu na onye ọ bụla nke nwere ike ị nweta ụdị ngwa nbipute akụkụ atọ nwere ike ịme ụdị nke onwe ha nke ngwaọrụ mkpuchi invisibility n'ụlọ, na-ebipụta ya na polymers plastik n'ime naanị awa atọ ruo asaa.
Mbipụta 3-D, nke a makwaara dị ka nrụpụta mgbakwunye, na-eji nozzle na-edobe ihe n'usoro na-esochi, na-abụkarị plastik a na-akpụgharị, dịka ụkpụrụ dijitalụ siri dị.
Ndị na-ebi akwụkwọ 3-D dị ugbu a n'ahịa maka ọtụtụ puku dollar, ma na-agbanwegharị biotechnology na ọganihu dị ka 3-D ebipụtara cell membranes, ntị bionic, ọkpụkpụ okpokoro isi, ụdị anụ ahụ nke X-ray na ultrasounds, bio-bots, na ọbụna ọgwụ.
Ntuziaka ọdịnihu maka teknụzụ invisibility
Site na nanotechnology, Urzhumov na-ekwu na ndị na-ebi akwụkwọ 3D nwere ike iji rọba ma ọ bụ iko na-ahụ anya wuo ngwaọrụ mkpuchi invisibility, nke na tiori nwere ike mebie ihie microwave nke ọma dị ka polymer opaque opaque o ji mee ihe. Ọ bụrụ na nke ahụ na-arụ ọrụ, ngwaọrụ mkpuchi n'onwe ya ga-esi ike iji anya gba ọtọ hụ.
Ọ bụ ezie na nkà na ụzụ ndị dị ugbu a enweghị ike ikpuchi ihe ndị buru ibu karịa cylinder ogologo ụkwụ, Urzhumov kwenyere na ngwaọrụ mkpuchi nwere ike ime ka ihe buru ibu ghara ịhụ ya anya.
"Egwuregwu kọmputa na-eme ka m kwenye na ọ ga-ekwe omume ịmepụta akwa mkpuchi mkpuchi polymer yiri nke dị gịrịgịrị dị ka otu inch nke agbachie gburugburu nnukwu ihe ọtụtụ mita na dayameta," ka o kwuru na ntọhapụ akụkọ.
Uwe mkpuchi enweghị ahụ nke Urzhumov nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ dị ka Harry Potter, mana ike imepụta ngwaọrụ dị otú ahụ nwere ngwa nbipute 3D na-esetịpụ ụkpụrụ dị egwu.
Ọ bụrụ na mgbe ndị na-eme nchọpụta na-emepụta uwe mkpuchi ka ukwuu nke na-adịghị ahụ anya nke nwere ike igbochi ìhè a na-ahụ anya site na ihe ndị na-akpụ akpụ, ọ dị mfe iche n'echiche na-adọrọ mmasị - na nke na-adịghị ahụkebe - enwere ike na onye ọ bụla nwere ike ibipụta otu n'ime okpuru ulo ha wee na-awagharị na-adịghị ahụ anya.
A na-ebipụta akwụkwọ zuru ezu na 3-D e biri ebi microwave invisibility cloaking ngwaọrụ na ntanetị na akwụkwọ akụkọ Optics Letters.
Anyị nwere ike ịchọ mkpuchi mkpuchi COVID-19 kwa afọ, oche Moderna kwuru
Onye nchoputa Moderna na onye isi oche Noubar Afeyan chere na enwere ike inwe mkpa maka nkwado COVID-19 kwa afọ n'etiti ọrịa a